Bit By Bit - Ethics - 6.4.3 Caddaaladda
Justice ku saabsan tahay hubinta in khatarta iyo faa'iidada cilmi-baarista waxaa si caddaalad ah u qaybiyeen.
Report Belmont ayaa ku dooday in mabda'a of Justice qabanayaa qaybinta culaabta iyo faa'iidada cilmi ah. Taas waxaa weeyaan, waa in aanay noqon kiiska in mid ka mid ah koox bulshada waxbay ushafeeci idanka kharashka cilmi halka koox kale oo gooyaaba ka faa'idaysigiisa. Tusaale ahaan, qarnigii 20aad 19aad iyo horraantii, culaabta adeegaya sida maadooyinka cilmi in tijaabooyin caafimaad oo ay inta badan ku dul dhacay masaakiinta, iyo faa'iidooyinka daryeelka caafimaadka hagaagay horrayn biyaa taajirka.
In dhaqanka, mabda'a of Justice ayaa markii hore lagu micneeyey agagaarka fikradda ah in dadka nugul waa in laga badbaadiyaa cilmi. In si kale loo dhigo, cilmi waa in aan loo oggolaan in si ula kac ah la dhaco on lahayni. Waa qaab dhibaan in ee la soo dhaafay, tiro badan oo ah waxbarashada anshaxa dhibaato ay ku lug ka qaybgalayaashu aad u nugul oo ay ku jiraan liidata waxbarasho iyo gacan bidixeeyay muwaadiniinta (Jones 1993) ; maxaabiista (Spitz 2005) ; hay'ad, caruurta maskax ahaan naafada ah (Robinson and Unruh 2008) ; iyo bukaanka isbitaalka jir ah oo u jilcay (Arras 2008) .
Ilaa 1990, si kastaba ha ahaatee, views of Justice bilaabeen inay uur ka ilaalinta in ay helaan (Mastroianni and Kahn 2001) . Tusaale ahaan, u dhaqdhaqaaqa dooday in caruurta, haweenka, iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay loo baahan yahay in la si cad waxaa ka mid ahaa in tijaabo si kooxahan ka faa'iidaysan karto aqoonta helay kaga soo bixiyey jirrabaadyo, kuwaas oo.
Waxa intaa dheer in su'aalo ku saabsan ilaalinta iyo helidda, mabda'a of Justice waxaa inta badan lagu micneeyey si kor loogu qaado su'aalaha ku saabsan magdhowga ku haboon ka qaybgalayaasha-su'aalaha oo ku xiran yihiin dood xooggan ee anshaxa caafimaadka (Dickert and Grady 2008) .
Dalbashada mabda'a of Justice saddexdii tusaalooyin weli waxay bixisaa hab kale si ay u qiimeeyaan. Ka qaybgalayaasha in midkoodna waxbarashada ayaa magdhow dhaqaale. Encore kicisaa su'aalaha ugu adag oo ku saabsan mabda'a of Justice. Inkastoo mabda'a Raxmaan soo jeedin laga yaabaa in laga reebo ka qaybgalayaashu ka yimid wadamada la dawladaha cadaadis, mabda'a of Justice doodi karin diido dadkan waxaa macquul ah in ay ka qaybgalayaasha in-iyo-sax cabbirka of faafreebka Internet faa'iideysan. Kiiska of dhadhamiya, Xiriirka, iyo Time ayaa sidoo kale su'aalo. Xaaladdan oo kale, mid ka mid ah group ardayda waxbay ushafeeci idanka culaabta ee cilmi-baarista iyo bulshada sida gargaarka ah oo dhan. Si aad u noqoto cad, si kastaba ha ahaatee, tani ma ahayn mid dadka ku gaar ah ugu nugul. Ugu dambeyntii, ee Dareenka ku sadhaysan ka qaybgalayaashu waxay ahaayeen muunad ka dadka ay u badan tahay in ay ka faa'iideystaan ​​natiijada cilmi, xaalad fiican u waafaqsan mabda'a of Justice.